MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Nhit Thit Mingalar mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
“ နှစ်သစ် မင်္ဂလာ” အစီအစဉ်
MPT ရဲ့ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အစီအစဉ်မှ ကြိုဆိုရင်း ၂၀၂၂ နှစ်သစ်အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။
နှစ်သစ်အခါသမယမှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း MPTမှဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သစ်၂၀၂၂ မှာ “နှစ်သစ်မင်္ဂလာ” အစီအစဉ်ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို ချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ နဲ့အတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့နော်။
ဒါ့အပြင် MPTမှ သုံးစွဲသူများအား“နှစ်သစ်မင်္ဂလာ”အစီအစဉ်ကျင်းပနေစဉ်ကာလအတွင်း စီစဉ်ပေးသွားမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပရိုမိုးရှင်းတွေအားလုံးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးတော့ ရရှိသွားမယ့် အထူးလက်ဆောင်တွေ၊ ဘောနပ်စ်တွေနဲ့ နှစ်သစ်ကို MPT နဲ့အတူဖြစ်သန်းကြဖို့ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ရရှိနိုင်သော ပရိုမိုးရှင်းကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုပြီး အခုပဲပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်လိုက်ပါ။
‘New Year ထောမှထော’ ပရိုမိုးရှင်း
ထောဘီ ၅ဆ/ ၇ဆ / ၁၀ဆ
MPT သုံးစွဲသူတွေ နှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် “New Year ထောမှထော” ပရိုမိုးရှင်းကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ MPT ရဲ့ နာမည်ကြီး“ထောဘီ ၅ဆ” ပက်ကေ့ချ်တွေအပြင် ထောဘီ ၇ဆ၊ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်တွေကိုပါ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ထဲ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အထူးလက်ဆောင်များကံထူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် ထောဘီ ၅ဆ/ ၇ဆ/၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်ကိုမဆို ဇန်နဝါရီလ (၁၄)ရက်မှ (၂၀)ရက်နေ့အတွင်း ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ထိပေါက် ကံစမ်းခွင့်(၁)ကြိမ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကံစမ်းခွင့်ဖြင့် ထိပေါက်ကစားလိုက်ရုံနှင့် ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ(၇ရက်သက်တမ်း) ထောဘီဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်များ ကံထူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းမှာပဲ ကံထူးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်လွှတ်မခံဘဲ အခုပဲ ရယူလိုက်ကြပါစို့။
ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ (၀၀:၀၀:၀၀)နာရီမှ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့ (၂၃:၅၉:၅၉)အထိ
ထောဘီ၁၀ဆ (All in One HtawB)
ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရန် *5010#
MPT4U တွင် ဝယ်ယူမည်
*ထောဘီ ၁၀ဆ (All in One ထောဘီ) Auto Renewal ပက်ကေ့ချ်များမှာ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။
၁။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့ (၀၀:၀၀:၀၀) နာရီ မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ (၂၃:၅၉:၅၉) နာရီအထိဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော MPT GSM/WCDMA prepaid၊ Postpaid စနစ် (လက်ရှိ) ဖုန်းအသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။ သုံးစွဲသူများသည် ထောဘီ ၅ဆ (1000/2000/5000)၊ ထောဘီ ၇ဆ (1111/2222/5555) နှင့် ထောဘီ ၁၀ဆ (3000/5000/10000) ပက်ကေ့ချ်များကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆိုဝယ်ယူပြီး MPT4U တွင် ထိပေါက်ကစား၍ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် အထိ ကံထူး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ Auto Renewal ထောဘီ ၁၀ ဆပက်ကေ့ချ်များ အတွက်
New Year ထောမှထော နှစ်သစ်ကူး အထူးပရိုမိုးရှင်းကို ခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၅။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော သုံးစွဲသူများသည် MPT4U တွင် ထိပေါက်ကစား၍ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် အထိ ကံထူး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ထောဘီ ၅ဆ ၊ထောဘီ ၇ဆ နှင့် ထောဘီ ၁၀ ဆ ထိပေါက်လက်ဆောင်များကို သက်တမ်း (၇)ရက် အတွင်း အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ် လက်ဆောင်၏ ပမာဏနှင့်သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၇။ ထောဘီ ၅ဆ၊ ထောဘီ ၇ဆ ၊ ထောဘီ ၁၀ဆပက်ကေ့ချ်များကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်ပြီး MPT4U တွင် ထိပေါက်ကံစမ်းကစား၍ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ် လက်ဆောင်ကို အကြိမ်အရေ အတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ရယူခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးထံ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ် မှားယွင်းဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက MPT သည် ၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်အတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်ကို ပြန်လည်တောင်းခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁။ New Year ထောမှထော အထူးပရိုမိုးရှင်း ဆိုတာဘာလဲ?
MPT သုံးစွဲသူများအကြိုက် MPT4U မှာထိပေါက်ကစားပြီး ထောဘီထိပေါက် ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် အထိ ကံထူး ရရှိနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ ထောဘီ ၅ဆ (1000/2000/5000) ၊ ထောဘီ ၇ဆ (1111/2222/5555)၊ ထောဘီ ၁၀ဆ (3000/5000/10000) ပက်ကေ့ချ်တွေကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်ကစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကာ MPT4U မှာ ထိပေါက်ကစားရုံဖြင့် ထောဘီထိပေါက် ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်အထိ လက်ဆောင်များကို ကံထူးခွင့်ကို ခံစားရရှိနိုင်မှာပါ။
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid and postpaid အသုံးပြုသူများ နှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူကံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
၃။ ထောဘီ ၅ဆ၊ ထောဘီ ၇ဆ၊ထောဘီ ၁၀ဆ လက်ဆောင်ကို ဘယ်နှရက်အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။
သက်တမ်း (၇)ရက် အထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ထောဘီ ၅ဆ၊ ထောဘီ ၇ဆ နှင့် ထောဘီ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ MPT4U မှာထိပေါက်ကစားပြီးတော့ (ထောဘီဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် လက်ဆောင်မရရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?
ထိပေါက်ကစားပြီးနောက် ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်အထိ လက်ဆောင်ရရှိနိုင်ခွင့်မှာ သင်၏ကံကောင်းခြင်းအပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ ထောဘီ ၅ဆ(1000/2000/5000)၊ ထောဘီ ၇ဆ (1111/2222/5555)၊ထောဘီ ၁၀ဆ (3000/5000/10000) ပက်ကေ့ချ်များကိုဝယ်ယူပြီး ရရှိထားသော ထိပေါက်ကစားခွင့်ဖြင့် MPT4U မှာထိပေါက်ကစားခြင်းဖြင့် ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်အထိ ရရှိနိုင်မှာပါ။ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အကျုံးဝင်သောပက်ကေ့ချ်များကို ထပ်မံဝယ်ယူ၍ ပိုမိုများသော ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ပမာဏများရယူနိုင်ရန်အတွက် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ထပ်မံကံစမ်းရယူနိုင်ပါသည်။
၅။ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်ကို မည်သည့်အသုံးပြုမှုအတွက်မဆိုသုံးနိုင်သလဲ။
ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ် လက်ဆောင်ကို >> MPT အချင်းချင်းခေါ်ဆိုမူ ၁မိနစ်ကို (၄၄.၄)ကျပ်၊ သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက် အသုံးပြုမှု 1MBကို (၁၃.၂)ကျပ်၊ နှင့် MPT အချင်းချင်း စာတိုပေးပို့မှုအတွက် (၂၀) ကျပ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
၆။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်ကို အကြိမ်များစွာ ရယူနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ထောဘီ ၅ဆ၊ ထောဘီ ၇ဆ၊ထောဘီ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်တွေကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူပြီး MPT4U မှာထိပေါက်ကစား၍ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်များကို စိတ်ကြိုက်ရယူ နိုင်ပါတယ်။
၇။ Auto Renewal ထောဘီ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် အထိရရှိနိုင်မည့် New Year ထောမှထော အထူးပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
မပါဝင်နိုင်ပါ။ Auto Renewal ထောဘီ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်များသည် New Year ထောမှထော အထူးပရိုမိုးရှင်း အတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။
၉။ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ပမာဏနဲ့သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား?
၉။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ။
၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှ (၂၀) ရက် အထိ။
‘နှစ်သစ်မင်္ဂလာ’အစီအစဉ်ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေအားလုံးမှာ ပါဝင်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
MPT ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေ ထပ်ရှိဦးမှာမို့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါနော်!
MPT Special Day
MPT မှအခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်
ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုစီရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ပုံကိုနှိပ်၍ (သို့) MPT Special Day pageတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
‘Special ထောမှထော’ ပရိုမိုးရှင်း
MPT သုံးစွဲသူတွေ နှစ်သက်ကြတဲ့ “ထောမှထော” ပရိုမိုးရှင်းကြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အရင်ကနဲ့မတူဘဲ ထောဘီ ၇ဆ၊ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်တွေအပြင် MPT ရဲ့ နာမည်ကြီး“ထောဘီ ၅ဆ” ပက်ကေ့ချ်ကိုပါ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ထဲ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီလိုထောဘီပက်ကေ့ချ်တွေအားလုံး ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သွားမှာမို့ “Special ထောမှထော” အဖြစ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အစီအစဉ်ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုအနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မည်သည့် ထောဘီ ၅ဆ/ ၇ဆ/၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်ကိုမဆို ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်မှ (၁၇)ရက်နေ့အတွင်း ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ထိပေါက် ကံစမ်းခွင့်(၁)ကြိမ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကံစမ်းခွင့်ဖြင့် ထိပေါက်ကစားလိုက်ရုံနှင့် ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ(၇ရက်သက်တမ်း) ထောဘီဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်များ ကံထူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထောဘီ၁၀ဆ (All in One
HtawB)ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရန် *5010#
‘Special ထောမှထော’ ပရိုမိုးရှင်း အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့ (၀၀:၀၀:၀၀) နာရီ မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ (၂၃:၅၉:၅၉) နာရီအထိဖြစ်ပါသည်။
Special ထောမှထော နှစ်သစ်ကူး အထူးပရိုမိုးရှင်းကို ခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
‘Special ထောမှထော’ ပရိုမိုးရှင်း အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ
၁။ Special ထောမှထော အထူးပရိုမိုးရှင်း ဆိုတာဘာလဲ?
MPT သုံးစွဲသူများအကြိုက် MPT4U မှာထိပေါက်ကစားပြီး ထောဘီထိပေါက် ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် အထိ ကံထူး ရရှိနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ ထောဘီ ၅ဆ (1000/2000/5000)၊ ထောဘီ ၇ဆ (1111/2222/5555)၊ ထောဘီ ၁၀ဆ (3000/5000/1000) ပက်ကေ့ချ်တွေကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်ကစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကာ MPT4U မှာ ထိပေါက်ကစားရုံဖြင့် ထောဘီထိပေါက် ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်အထိ လက်ဆောင်များကို ကံထူးခွင့်ကို ခံစားရရှိနိုင်မှာပါ။
ထိပေါက်ကစားပြီးနောက် ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်အထိ လက်ဆောင်ရရှိနိုင်ခွင့်မှာ သင်၏ကံကောင်းခြင်းအပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ ထောဘီ ၅ဆ(1000/2000/5000)၊ ထောဘီ ၇ဆ (1111/2222/5555)၊ထောဘီ ၁၀ဆ (3000/5000/1000) ပက်ကေ့ချ်များကိုဝယ်ယူပြီး ရရှိထားသော ထိပေါက်ကစားခွင့်ဖြင့် MPT4U မှာထိပေါက်ကစားခြင်းဖြင့် ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်အထိ ရရှိနိုင်မှာပါ။ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အကျုံးဝင်သောပက်ကေ့ချ်များကို ထပ်မံဝယ်ယူ၍ ပိုမိုများသော ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ပမာဏများရယူနိုင်ရန်အတွက် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ထပ်မံကံစမ်းရယူနိုင်ပါသည်။
၇။ Auto Renewal ထောဘီ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် အထိရရှိနိုင်မည့် Sepcial အထူးပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
မပါဝင်နိုင်ပါ။ Auto Renewal ထောဘီ ၁၀ဆ ပက်ကေ့ချ်များသည် Special ထောမှထော အထူးပရိုမိုးရှင်း အတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။
၈။ ထောဘီထိပေါက်ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင် ပမာဏနဲ့သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား?
၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှ (၁၇) ရက် အထိ။
ခရစ္စမတ်(စ်)အားလပ်ရက်တွေကို MPT နှင့်အတူ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ!
၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus
100 GB အထိ ဒေတာဘောနပ်(စ်)တွေ
နှစ်သစ်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ရဲ့ ခရစ္စမတ်(စ်)ကာလပရိုမိုးရှင်းအဖြစ် “ထောပြီးရင်းထော” ပရိုမိုးရှင်းကို စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် မည်သည့် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ကိုမဆို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ထိပေါက် ကံစမ်းခွင့်(၁)ကြိမ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကံစမ်းခွင့်ဖြင့် ထိပေါက်ကစားလိုက်ရုံနှင့် 100GB အထိ (၃ရက်မှ ၇ရက်သက်တမ်း) ဒေတာလက်ဆောင်ဆုကြီးများကို ပရိုမိုးရှင်းကာလ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ မှ ၂၆ ရက်) အတွင်း ကံထူးရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပရိုမိုးရှင်းမှာပါဝင်ပြီး ဒေတာလက်ဆောင်ဆုကြီးတွေကို ရင်ခုန်ကံစမ်းကြည့်ကြပါစို့။
*Data Carry Plus – Auto Renewal (၉၇၉ ကျပ် နှင့် ၁၂၇၉ ကျပ်) ပက်ကေ့ချ်များမှာ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။
၆၉၉ကျပ် 280MB -
Lucky Data 1000GB အထိ
(သက်တမ်း ၃၀ ရက်)
၃၀ ရက်[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(၇)ရက် အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်] *777*1#
၇၉၉ကျပ် 380MB - *777*2#
၉၉၉ ကျပ်	 515MB
(သက်တမ်း ၃ ရက် မှ ၇ရက်)
၁၂၉၉ ကျပ် 675MB *777*4#
၁၇၉၉ ကျပ် 935MB *777*5#
၂၆၉၉ ကျပ် 1425MB *777*6#
၄၄၉၉ ကျပ် 2375MB *777*7#
၈၉၉၉ ကျပ် 4750MB *777*8#
၁၇၉၉၉ ကျပ် 9500MB *777*9#
၂၆၉၉၉ ကျပ် 14250MB *777*0#
ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရန် *777#
ဂိမ်းကစားရတာနှစ်သက်ကြတဲ့ MPT အသုံးပြုသူများအတွက်…
Codashop မှာ MLBB စိန် ကျပ် ၅,၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် ၀ယ်ယူလိုက်တာနဲ့ ၃၀,၀၀၀ ကျပ်တန်ဖိုးရှိ MLBB စိန်လက်ဆောင်များ အပိုကံထူးနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ ပမာဏအတိုင်း MPT ဒေတာတွေကို (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း ပြန်လည်ရရှိမှာဆိုတော့ အခုပဲ စိန်ဝယ်လိုက်ကြရအောင်။ (ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် အထိပဲနော်)
ခရစ္စမတ်(စ်) အားလပ်ရက်ကာလမှာ သင့်မိသားစုနှင့်ဝေးကွာနေရပေမယ့် အနီးအနားမှာရှိနေသလို ဒီကာလလေးကို မိသားစုနှင့်အတူတကွ ဖြတ်သန်းချင်ပါသလား?
ချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အနေဝေးလို့ လူချင်းမတွေ့နိုင်ပေမယ့် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ MPT ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး သင်ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ လူချင်းဝေးနေပေမယ့် စိတ်ချင်းနီးစပ်နိုင်ပြီနော်!
အဝေးမှာရောက်နေတဲ့ သင်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေဆီကို နှစ်သစ်လက်ဆောင်ပေးပို့ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလား။
“ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီး MPT ရဲ့ Data၊ Voice နဲ့ ထောဘီ ပက်ကေ့ချ်တို့ကို သင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီ အထူးလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်လေးတွေကို အတူတကွဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါ။
MPT4U မှတစ်ဆင့် အထူးလက်ဆောင်ပေးပို့ရန်
ထောပြီးရင်းထော အထူးပရိုမိုးရှင်း အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ (၀၀:၀၀:၀၀) နာရီ မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊
(၂၆) ရက်နေ့ (၂၃:၅၉:၅၉) နာရီအထိဖြစ်ပါသည်။(ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၇ရက်)
၃။ သုံးစွဲသူများသည် ၉၉၉ကျပ် နှင့် အထက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆိုဝယ်ယူပြီး MPT4U တွင် ထိပေါက်ကစား၍ ဒေတာလက်ဆောင် 100GB အထိ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အခြားဒေတာပက်ကေ့ချ်များ (၉၉၉ကျပ် နှင့် အထက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များမှလွဲ၍) ဝယ်ယူပါက ဒေတာလက်ဆောင်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ ဒေတာလက်ဆောင်ကို သက်တမ်း (၃)ရက် မှ (၇)ရက် အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (100GB ဒေတာလက်ဆောင်အတွက်သာ သက်တမ်း (၇)ရက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အခြားသော ဒေတာလက်ဆောင်များအတွက် သက်တမ်း (၃)ရက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။)
၆။ ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက်ဖြစ်သော Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်ပြီး MPT4U တွင် ထိပေါက်ကံစမ်းကစား၍ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ဒေတာလက်ဆောင်ကို အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ရယူခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ Data Carry Plus – Auto Renewal (၉၇၉ကျပ်နှင့် ၁၂၇၉ ကျပ်)ပက်ကေ့ချ်များအတွက် ထောပြီးရင်းထော အထူးပရိုမိုးရှင်းကို ခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၈။ ဒေတာလက်ဆောင် ပမာဏနှင့်သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၉။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးထံ ဒေတာလက်ဆောင် ပေးအပ်ရာတွင် မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက MPT သည် မှားယွင်း ပေးအပ်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို သုံးစွဲသူထံမှ ပြန်လည်တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ထောပြီးရင်းထော အထူးပရိုမိုးရှင်း အတွက် အမေးများသောမေးခွန်းများ
၁။ ထောပြီးရင်းထော အထူးပရိုမိုးရှင်း ဆိုတာဘာလဲ?
MPT သုံးစွဲသူများအကြိုက် MPT4U မှာထိပေါက်ကစားပြီး ဒေတာလက်ဆောင် 100GB အထိ ရရှိနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်တွေကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆိုဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်ကစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကာ MPT4U မှာ ထိပေါက်ကစားရုံဖြင့် 100GB အထိ ဒေတာလက်ဆောင်များကို ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မှာပါ။
၃။ ဒေတာလက်ဆောင်ကို ဘယ်နှရက်အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။
သက်တမ်း (၃)ရက် မှ (၇)ရက် အထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ 100 GB ဒေတာလက်ဆောင်ရရှိပါတယ်။ ဘယ်နှရက်အသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။
100 GB ဒေတာလက်ဆောင်ကို (၇)ရက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၅။ Data Carry Plus 699Ks ပက်ကေ့ချ်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ MPT4U မှာထိပေါက်ကစားပြီးတော့ (100GB အထိ) ဒေတာလက်ဆောင်မရရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?
၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်တွေကို ဝယ်ယူပြီး MPT4U မှာထိပေါက်ကစား၍ ဒေတာလက်ဆောင် 100GB အထိ ရရှိမှာပါ။
၆။ Data Carry Plus 999Ks ပက်ကေ့ချ်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဒေတာလက်ဆောင် (100GB ) မရရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?
ထိပေါက်ကစားပြီးနောက် 100GB အထိ ဒေတာလက်ဆောင်ရရှိနိုင်ခွင့်မှာ သင်၏ကံကောင်းခြင်းအပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကိုဝယ်ယူပြီး ရရှိထားသော ထိပေါက်ကစားခွင့်ဖြင့် MPT4U မှာထိပေါက်ကစားခြင်းဖြင့် ဒေတာလက်ဆောင်ပမာဏ အများဆုံး 100GB အထိ ရရှိနိုင်မှာပါ။ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အကျုံးဝင်သောပက်ကေ့ချ်များကို ထပ်မံဝယ်ယူ၍ ပိုမိုများသော ဒေတာလက်ဆောင်ပမာဏများရယူနိုင်ရန်အတွက် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ထပ်မံကံစမ်းရယူနိုင်ပါသည်။
၇။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ဒေတာလက်ဆောင်ကို အကြိမ်များစွာ ရယူနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်တွေကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူပြီး MPT4U မှာထိပေါက်ကစား၍ ဒေတာလက်ဆောင်များကို စိတ်ကြိုက်ရယူနိုင်ပါတယ်။
၈။ Data Carry Plus Auto Renewal (979Ks) ပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် 100 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်ရရှိနိုင်မည့် ထောပြီးရင်းထော အထူးပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
မပါဝင်နိုင်ပါ။ Data Carry Plus Auto Renewal (979 Ks နှင့် 1279 Ks) ပက်ကေ့ချ်များသည် ထောပြီးရင်းထော အထူးပရိုမိုးရှင်း အတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။
၉။ ဒေတာလက်ဆောင် ပမာဏနဲ့သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား?
၁၀။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ယခင်ရရှိနေသောLucky Data Bonus ကိုပါ ရရှိမှာပါလား?
ရရှိနိုင်မှာပါ။ ထောပြီးရင်းထော အထူးပရိုမိုးရှင်း ဒေတာလက်ဆောင်အပြင် 1000GB အထိ Lucky Data များပါ ရရှိခံစားနိုင်မှာပါ။
၁၁။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ။
၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၆) ရက် အထိ။
MPT Club ‘New Year’ ပရိုမိုးရှင်း
MPT ကို အစဥ်တစိုက် အသုံးပြုလာကြသော MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင် MPT ပွိုင့်များကို ၃၀% အထူးလျော့စျေးကူပွန်ဖြင့် Mobile Reward Product (Voice, SMS, Data, Htaw B Cashback) များ လဲလှယ်ရယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေး လာပါပြီ။
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက် ၂၀၂၁ မှ ဇန်နဝါရီ လ ၄ရက် ၂၀၂၂ အထိသာဖြစ်ပြီး အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် အခုပဲ MPT4U မှတဆင့် လဲလှယ်လိုက်ကြရအောင်။
“MPT Special Day” ပရိုမိုးရှင်းပွဲကြီးက ဒီနေ့နော်! သင့်စိတ်ကြိုက် ပရိုမိုးရှင်းတွေမှာ အခုပဲ ပါဝင်လိုက်ပါ။
MPTမှ အထူးစီစဉ်ပေးထားတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။ စုံလင်လှတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲရင်း သင့်တစ်နေ့တာကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။ တစ်ရက်ထဲသာရရှိနိုင်မယ့် ပရိုမိုးရှင်းတွေပါဝင်တာကြောင့် လက်လွှတ်မခံသင့်ဘူးနော်။
MPT ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပွဲစဉ်
MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး MPT IPTV application မှာ MPT Mobile Data အသုံးပြုပြီး သီးသန့် စာရင်းသွင်းခ ပေးစရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက် (Live) ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် အချိန်ဇယားကိုလည်း ဤ နေရာတွင်
ကြည့်ရှု စစ်ဆေး နိုင်ပါသည်။
အခုပဲ *1717# ကို ခေါ်ဆိုပြီး MPT IPTV application ကို အခမဲ့ Download ရယူလိုက်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါနေရာတွင်နှိပ်၍ တိုက်ရိုက် (Live) ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
MPT4U မှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်
MPT ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး ဒေတာပက်ကေ့ချ် - Data Carry Plus
ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်ကြီးတစ်ခု ရှိပါမယ်!
“MPT Special Day” ပရိုမိုးရှင်းပွဲကြီးက စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်ကောင်းတွေနှင့်အတူ MPT သုံးစွဲသူများထံသို့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးပရိုမိုးရှင်းအဖြစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိလာပါတော့မယ်။ MPT မှစီစဉ်ပေးထားတဲ့ Promotion အစီအစဉ်တွေကို ဒီတစ်နေရာတည်းမှာပဲ စုစည်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာ ဆက်ဆက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါဝင်ပေးကြပါနော်။
၂၀၂၂ နေ့သစ်လေးတွေကို MPT Special Flash အထူးအစီအစဉ်နဲ့ စတင်လိုက်ကြရအောင်!
MPT Special Flash
အထူးလက်ဆောင်အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရင်း ပျော်ရွှင်ရစေမယ့် MPT Special Flash အစီအစဉ်ကြီးက ၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ။
ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းပဲ ကျင်းပသွားမယ့် ဒီအစီအစဉ်ကြီးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဆိုရင်တော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုမယ်နော်။
ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်မှ (၁၀)ရက်နေ့အတွင်း *7111# ကိုခေါ်ဆိုစာရင်းပေးသွင်းကာ “MPT Special Flash” အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီး ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာ အထူးလက်ဆောင်ကို ကံထူးရယူကြပါစို့။
ဒီလို သတင်းကောင်းလေးကို သင့်ရဲ့ချစ်ခင်သူများနှင့်အတူ မျှဝေလိုက်ပါ။
MPT Special Flash စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ဒီ “နှစ်သစ်မင်္ဂလာ” အစီအစဉ်ကြီးကနေ နောက်ထပ်အတူပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းများကိုပါ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ MPT ကနေ ဘယ်လိုအထူးလက်ဆောင်တွေ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတာ အတူစောင့်မျှော်ကြည့်ကြစို့။
ဒီနေ့မှာ ကျင်းပတဲ့“MPT Special Day” ပရိုမိုးရှင်းပွဲကြီးကို ပါဝင်ဆင်နွှဲရင်း ၂၀၂၂ ကို MPT ရဲ့ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ စတင်လိုက်ကြပါစို့။
MPT Special Day’
Please find our wide range of customer services below for all your needs.